Old harbor City of Kathar – Myanmar Photo News
ကသာမြို့ရဲ့ တည်နေရာလေးက ????
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲ့မြောက်ဘက် ဧရာဝတီမြစ်ရဲ့ အနောက်ဘက်မှာတည်ရှိပြီး ကိုလိုနီခေတ်အတွင်းမှာတော့ အရမ်းကိုစည်ကားခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းက ဆိပ်ကမ်းမြို့လေးတစ်မြို့ပါ။ ကသာမြို့လေးရဲ့ အချို့နှစ်ထပ်အိမ်ကြီး🏠တွေကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ ကိုလိုနီခေတ်ရဲ့အငွေ့အသက်တွေအပြည့်အဝပေးနိုင်မှာသေချာပါတယ်။🌳🌿သစ်တောအုပ်များ အလွန်များပြားတာကြောင့် နေချင်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် စွဲဆောင်ထားတဲ့ ရာသီဥတု လေးကိုလဲပိုင်ဆိုင်ထားသလို ခရိုင်ရုံးများစိုက်ရာမြို့လဲဖြစ်ပါတယ်။
ကသာမြို့လေး လူသိများလာရခြင်း အဓိကအကြောင်းအရင်း ?????
၁၉၄၃ ခုနှစ်မှာ စာရေးဆရာ George Orwell ရဲ့ ပထမဆုံး ဝတ္ထု 📓 Burmese Days (မြန်မာပြည်မှနေ့ရက်များ) စာအုပ်ရဲ့ အဓိကဇာတ်ဝင်ခန်းနေရာ ကျောက်တံတားမြို့ဟာ ဤ ကသာမြို့ဖြစ်နေတာကြောင့် နိုင်ငံခြားသားတွေကိုယ်တိုင် လာရောက်လေ့လာလည်ပတ်ရင်း ထင်ရှားကျော်ကြားလာပါတယ်။